Samsung ရဲ့ ကွေးညွှတ် ဖုန်းဟာ ဘယ်လို ဒီဇိုင်း ဖြစ်မလဲ ? – Myanmar Mobile App
Posted on November 9, 2018 Author Ko Nyi	Comment(0)
Samsung က Developer Conference မှာ ကွေးညွှတ် ဖုန်းရဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ မျက်နှာပြင်ရဲ့ အရွယ်အစားများ၊ App Design များကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းကို ခေါက်ချိုးထားချိန်မှာ မြင်ရတဲ့ မျက်နှာပြင်ကို Cover Display လို့ အမည်ပေးထားပြီး ၄.၅၈ လက်မ အရွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ Pixel သိပ်သည်းဆမှာ 420dpi ဖြစ်ပြီး Resolution မှာ 840x1960p ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါက်ထားတာကို ဖြန့်လိုက်ရင် ၇.၃ လက်မ မျက်နှာပြင် ဖြစ်သွားပြီး Resolution မှာ 1536x2152p ဖြစ်ပါတယ်။
Apps များက Multitasking စွမ်းရည် အသစ်များရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရမှာပါ။ အရွယ်ကြီး မျက်နှာပြင်မှာ ၀င်းဒိုးများစွာကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဗီဒီယို ကြည့်နေရင်းနဲ့ အီးမေး စစ်နိုင်ပါတယ်။ ဂူဂယ်လ်က Android Q မှာ ခေါက်ချိုးဖုန်းများကို ထောက်ပံ့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အန်းဒရွိုက်က App Continuity ကို ထောက်ပံ့လာမှာပါ။ အဲဒီအတွကန် ပင်မမျက်နှာပြင်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ App ကို အရွယ်ကြီး မျက်နှာပြင်မှာ ဆက်သုံးနိုင်မှာပါ။
Developer Conference မှာ ပြသခဲ့တဲ့ ခေါက်ချိုး ဖုန်းဟာ Concept အဆင့်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ဖိုင်နယ် ဗားရှင်းဟာ ပိုမို ပါးလွှာလာမယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။
Samsung ရဲ့ ကှေးညှတျ ဖုနျးဟာ ဘယျလို ဒီဇိုငျး ဖွဈမလဲ ?
Samsung က Developer Conference မှာ ကှေးညှတျ ဖုနျးရဲ့ ဒီဇိုငျးနဲ့ မကျြနှာပွငျရဲ့ အရှယျအစားမြား၊ App Design မြားကို ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ဖုနျးကို ခေါကျခြိုးထားခြိနျမှာ မွငျရတဲ့ မကျြနှာပွငျကို Cover Display လို့ အမညျပေးထားပွီး ၄.၅၈ လကျမ အရှယျ ဖွဈပါတယျ။ Pixel သိပျသညျးဆမှာ 420dpi ဖွဈပွီး Resolution မှာ 840x1960p ဖွဈပါတယျ။ ခေါကျထားတာကို ဖွနျ့လိုကျရငျ ၇.၃ လကျမ မကျြနှာပွငျ ဖွဈသှားပွီး Resolution မှာ 1536x2152p ဖွဈပါတယျ။
Apps မြားက Multitasking စှမျးရညျ အသဈမြားရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးမြားကို ခံစားရမှာပါ။ အရှယျကွီး မကျြနှာပွငျမှာ ဝငျးဒိုးမြားစှာကို စီမံခနျ့ခှဲနိုငျမှာပါ။ ဥပမာအားဖွငျ့ဗီဒီယို ကွညျ့နရေငျးနဲ့ အီးမေး စဈနိုငျပါတယျ။ ဂူဂယျလျက Android Q မှာ ခေါကျခြိုးဖုနျးမြားကို ထောကျပံ့ပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အနျးဒရှိုကျက App Continuity ကို ထောကျပံ့လာမှာပါ။ အဲဒီအတှကနျ ပငျမမကျြနှာပွငျမှာ ဖှငျ့ထားတဲ့ App ကို အရှယျကွီး မကျြနှာပွငျမှာ ဆကျသုံးနိုငျမှာပါ။
Developer Conference မှာ ပွသခဲ့တဲ့ ခေါကျခြိုး ဖုနျးဟာ Concept အဆငျ့သာ ရှိပါသေးတယျ။ ဖိုငျနယျ ဗားရှငျးဟာ ပိုမို ပါးလှာလာမယျလို့ ကုမ်ပဏီက ပွောပါတယျ။
Posted on March 18, 2018 Author myanmarmobileapp
iPhone စတိုင်လ် စမတ်ဖုန်းကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မျက်နှာပြင်အပြည့်ရဖို့အတွက်ကတော့ ဒီနည်းလမ်းပဲရှိပါသေးတယ်။ ရုပ်ဆိုးတာတွေဘာတွေ ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါ။ Galaxy S9 ကိုတော့ ချစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခြားသောထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ မျက်နှာပြင်ပြည့်ရဖို့အတွက်ကတော့ ဒီနည်းလမ်းနောက်ကို လိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်ကသာ မှန်ကန်မယ်ဆိုရင်တော့ OnePlus နဲ့ Xiaomi တို့ကလည်း အဟိုက်လေးနောက်ကို လိုက်ကြပါပြီ။ XDA ဟာ OxygenOS Open Beta4ရဲ့ firmware ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ အဲဒီ firmware ကို OnePlus6protoype အတွက် အသုံးပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။ firmware ဖိုင်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဟိုက်လေးပါဝင်နေတာကို သတိထားလိုက်မိပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ အံ့သြစရာပါပဲ။ လာမယ့် Xiaomi Mi7အတွက်လည်း […]
Posted on April 28, 2019 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)
Zawgyi Version လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် သူရဲ့ plug adapter အချို့ကို အသုံးပြုခြင်းရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက် သုံးစွဲသူတွေကို အသိပေးထားပါတယ်။ လဲလှယ်ပေးမယ့်ပရိုဂရမ်လေးမှာတော့ Mac တွေနဲ့အတူ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ သုံးခေါင်း AC wall plug adapter ၊ ၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၀ကြား iOS အချို့မှာ တွဲသုံးရတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာလည်း ဒီအကြောင်းကို တင်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီ adapter တွေဟာ Apple World Travel Adapter Kit ထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ဟာတွေပါ။ အတော်ရှားပါးတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါပဲလို့ ပြောထားပါတယ်။ ချို့ယွင်းနေတဲ့ Apple သုံးခေါင်း wall plug adapter တွေဟာ ကျိုးပဲ့သွားနိုင်ပြီးတော့ ထိလိုက်ရင် လျှပ်စစ်ရှော့ခ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ “သုံးစွဲသူတွေ အန္တရာယ်ကင်းရေးက […]
Facebook က TikTok ကို ယှဉ်ပြိုင်မယ့် Lasso App ကို ဖြန့်ချီ